FAMATSIANA RANO FISOTRO MADIO : Mbola misedra olana goavana i Madagasikara
Hatreto aloha dia hita soritra fa ezaka sy dingana goavana no lalovan’i Madagasikara raha mikasika ny amin’ny famatsiana rano fisotro madio. Mbola faritra maro manerana ny Nosy no fantatra fa tsy manana ny rano fisotro madio satria 25% monja ny tahan’ireo misitraka izany. 19 octobre 2017
Ny any amin’ny Faritra atsimo Andrefan’i Nosy no anisany mijaly rano, indrindra fa miditra ao anatin’ny maintany ny toetrandro eto amintsika ankehitriny. Na izany aza anefa dia misy ny ezaka ataon’ny avy ao amin’ny ministeran’ny Rano sy ny mpiara-miombon’antoka mba hahatratrarana ny tanjona ka hisy ny fidinanana ifotony amin’ny toerana maro hananganana fotodrafitrasa.
Raha ny nambaran’ny Tale Jeneralin’ny rano ao amin’ny minisiteran’ny Rano, Andriavelojaona Nirina dia “ hitety tanàna maro izy ireo ato ho ato ka ireo izay misedra olana indrindra no ananganana paompin-drano sy fotodrafitrasa. Azo lazaina fa marefo dia marefo ny fisian’ny rano ary saika ho mitaraina amin’ny haintany avokoa ny ankamaroan’ireo mponina. Manantena ny fandraisan’andraikitra ataon’ny mpitondra fanjakana noho ny fahasahiranana ankehitriny ny ankabeazan’ny vahoaka madinika.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4676) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (138) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021